भारतीय राजदूतावासमा छात्रवृत्तिको नाममा घोटाला : सांसद चन्दा चौधरीको के साइनो ? | Diyopost
भारतीय राजदूतावासमा छात्रवृत्तिको नाममा घोटाला : सांसद चन्दा चौधरीको के साइनो ?
काठमाडौं, २८ पुस । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)की प्रभावशाली नेतृ एवं संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्दा चौधरीले पछिल्लो समय भारतीय दूतावासमा आफ्नो राम्रो पकड बनाएकी छन् । पछिल्लो केही समयदेखि उनलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा भारतका कार्यवाहक राजदूत डा. अजय कुमारले आर्थिकदेखि भौतिक संरचना निर्माणको लागि दूतावासबाट करोडौं रुपैयाँ उपलब्ध गराइ रहेको खुलासा भएको छ ।
स्रोतका अनुसार सांसद चौधरी दिनै पिच्छे दूतावास धाउने गरेकी छन् । सांसद चौधरी दूतावासमा कार्यवाहक राजदूत अजयसँग सहयोग माग्न विभिन्न योजनाहरु लिएर आउने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘अचेल कार्यवाहक राजदूत डा.अजय कुमारले सांसद चौधरीलाई अति नै सहयोग गरिरहेका छन् ।’ राजपा उच्च स्रोतले भन्यो ।
उक्त छात्रबृत्तिलाई समेत सांसद चौधरी र कार्याबाहक राजदूत अजयको सम्बन्धको परिणामको काणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ ।
सांसद चौधरीको यस्तो रवैयालाई लिएर राजपा पार्टीभित्र समेत विरोध हुन थालेको छ ।
राजपा पार्टीभित्रकै कतिपय केन्द्रीय नेताहरुले यसको विरोधसमेत गरिरहेका छन् । राजपाका एक नेताका अनुसार सांसद चौधरीलाई मात्र दूतावासले सहयोग गरेकोमा पार्टीभित्र अनेकन टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
सांसद चौधरीलाई मात्र दूतावासले सहयोग गर्ने, अरु नेताहरुलाई किन नगरेको, यसमा केही रहस्य रहेको छ,’ ती नेताले भने, ‘यस विषयमा छलफल हुने तयारी भइरहेको छ ।’
ती नेताका अनुसार सांसद चौधरीलाई चढ्न दुतावासको बजेटबाट स्कोरपियो गाडी उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यसैगरी दूतावासले प्रत्येक महिनामा विभिन्न कार्यक्रमको लागि ५ देखि १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको स्रोतको भनाइ छ ।
केही समयअघि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी अदित्यनाथ नेपाल भ्रमणमा आएको बेला सांसद चौधरीले विशेष भूमिका खेलेकी थिइन् । जसकारण उनको सम्बन्ध कार्यवाहक राजदूत अजय कुमारसँग बढेको स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तो गतिविधिले कार्यवाहक राजदूत अजय कुमारको सहयोग गर्ने मोह सांसद चौधरीप्रति बढ्दै प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
भारतीय दूतावासभित्र छात्रवृति वितरणमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल हुने गरेको छ ।
एक विद्यार्थीले इन्जिनिरिङ पढ्नका लागि भारतीय दूतावासमा छात्रवृति प्राप्त गर्न लिखितदेखि मौखिक परीक्षा दिए ।
यसरी कन्स्लटेन्सी र दूतावासका कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा भारतीय छात्रवृति पाउनकै लागि लाखौँ लाखको चलखेल हुने गरेको यस घटनाले प्रष्ट पारेको छ ।
स्रोतका अुनसार कन्स्लटेन्सी र दूतावासका कर्मचारीहरु माथि पैसा बुझाउनुपर्छ भन्दै छात्रवृति प्राप्त गर्नेहरुसँग पैसा असुल्ने गरेका छन् ।
नेताहरुकै सिफारिसमा भारतीय राजदूतावासले छात्रवृति दिइनुले नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभावबारे छर्लंग हुन सकिन्छ । त्यसो त दूतावासले दिने छात्रवृत्तिमा कार्याबाहक राजदूत नै मुछिने गरेका छन् । अजय कुमारले नै छात्रवृत्तिको नाममा घोटाला गर्ने गरेको दूतावास स्रोत बताउँछ ।
छात्रवृति प्राप्त गर्नेसँग पैसा असुल्ने कुरा विवादमा आएपछि दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी निरज कुमार जैसवालको नाम सतहमा आएको छ ।
यसरी पैसा असुलेको भन्दै जैसवालको नाम बाहिरआएपनि दूतावासले कुनै कारवाही गरेको छैन । जैसवाल कार्यबाहक राजदूतका निकट व्यक्ति हुन् ।
निरजलाई कारवाही गर्नुको साटो उपहार स्वरुप कार्यवाहक राजदूत अजय कुमारले पोल्टिकल वीङमा लगेर बचाएका छन् । कार्यवाहक राजदूत निरजलाई कुनै कारवाही नै नगरी काखी च्यापेर राखेका छन् ।
सांसद चौधरीलाई राजदूतावाससँग रहस्यमयी सम्बन्धको विषयमा प्रतिक्रिया लिन उनको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाइनन् ।